Kedu ka m ga esi nyochaa backlinks na ebe nrụọrụ weebụ m iji nwee nchebe?
Ihe niile ịchọrọ inwe nchebe bụ iji nyochaa backlinks ma kpochapụ ihe ọjọọ na obere oge. Ọtụtụ mgbe, Ana m eji Moz na Open Site Explorer na nchịkọta nchịkwa maka nlele abụọ. Ma otu esi ekwu ezi backlinks si ezigbo ndị mmadụ? N'okpuru ebe m ga-akọwa nke a.
Gịnị na-eme ka azụlink dị njọ?
Ịtọ ya na Bekee a na-ede ede, njikọ kachasị njọ bụ nke na-agbagha (ma ọ bụ, imebi) isi nduzi Google maka webmasters. Ma enwere njirimara ole na ole na-eme ka azụ backlink ọjọọ maka nzube SEO (ma ọ bụghị, backlink). Njikọ ọjọọ ọ bụla na-abịa site n'otu n'ime ebe ndị a:
Ngalaba weebụ ọ bụla ma ọ bụ blog nke nataworị ụgwọ ọrụ site n'aka Google - ma ọ bụrụ na enwere ọkwa ya nke ọma na algorithm, ma ọ bụ dọrọ ya aka - inwe njikọ na ha ga-eme gị otu.
Isi mmalite na-enweghị isi, enweghị njikọ na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ isiokwu blog. N'iburu n'uche na njirimara azụ azụ dị oke egwu, ị ga-adịrị mma inweghị backlinks ma ọlị, kama ịmepụta ọtụtụ ndị na-abaghị uru.
weebụsaịtị ma ọ bụ blọọgụ na-adịghị mma ma ọ dị oke ala dị mma na ibe - na abaghị uru maka ezigbo mmadụ, ihe ndị dị otú ahụ ga-abụ ihe na-abaghị uru iji nweta backlinks na.
Akwụkwọ ndekọ ederede dị ala na-eji iji gbanwee isiokwu na ọdịnaya abụọ, yana netwọk blog - zere ha na ọnụego ọ bụla, ọ gwụla ma ịchọrọ ị nweta ngwa ngwa site n'aka Google.
Ibe weebụ nke na-ekwu banyere ịkwa iko, ịgba chaa chaa, ma ọ bụ ahịa ọgwụ, yana akwụkwọ nchịkọta mmadụ, ndị nwere ike ịbanye ma ọ bụ ndị malware-spawning.
Blọọgụ dị ala dị mma nke nabatara nnukwu akwụkwọ ozi ndị ọbịa. O doro anya na idebe onwe gị bụ ụzọ dị mma iji nweta backlinks, ma nwee ọnụọgụ abụọ ị nọ ebe kwesịrị ekwesị iji nye onyinye gị bara uru.
Nyochaa azụghachi azụ iji wepụ ndị kasị njọ
Ozugbo anyị ghọtara ihe na-eme ka azụ azụ azụ, ọ bụ oge ịlele ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ̄ bụ blog. Dị ka m kwuwororịrị, iji otu n'ime ihe ndị ahụ dị n'ịntanetị bụ ụzọ kachasị mma iji nyochaa backlinks. Ya mere, site na iji Open Site Explorer ma ọ bụ Semalt Analyzer, ị nwere ike nyochaa profaịlụ backlink gị ngwa ngwa ma mee ọbụna usoro nyocha oge iji nyochaa backlink na oge kwesịrị ekwesị. Ya mere, ugbu a, ị ga-ekpofuo ma ọ dịkarịa ala na ihe ndị dị njọ azụ azụ iji gbochie ha ịmebi ọnọdụ gị.
Ozugbo i mechara nyochaa azụ azụ, m na-atụ aro ka ị rụọ ọrụ. csv faịlụ iji nyo ọ bụghị naanị site na ihe ịrịba ama ịdọ aka ná ntị (na nke ọ bụla nwere ike backlink) ma site na ọnọdụ ha na Google Index. N'ụzọ dị otú ahụ, ị ​​ga-ekpochapụ ndị kasị njọ dị ka "ngalaba a na-edeghị aha. "Na - esote, ihe niile ị ga - eme bụ iji nlezianya nyochaa njikọ ọ bụla na - enyo enyo chọpụtara site na backlink research tool - ma kpebie ma ọ ga - ewepụ ma ọ bụ dozie. E kwuwerị, egbula oge iji nyochaa nyocha zuru ezu iji nyochaa backlinks site na usoro dum - nke ga enyere gị aka ịghọta uru ha bara Source .